Mazambiringa uye chokoreti zvihwitsi - Thermomix Recipes | ThermoRecipes
Mazambiringa uye chokoreti zvihwitsi
Kudya35 maminitsi6 vanhu
Rimwe zuva, hanzvadzi dzangu-in-in-ini neni takanga tichifunga nezve nyore nyore mapeji kwavari vana maigona kutibatsira. Pakutanga taingofunga chete cookies y machokoreti Asi zvakazoitika kwatiri kuti kana isu takagadzirira keke yechipanji pachine nguva, vaigona kugadzirira aya mazambiringa uye chokoreti masiwiti pasina dambudziko.
Uye kutaura nezve gadzirira pamberi Waiziva here kuti makeke anogona kuomeswa nechando? Ini ndinoshandisa iyi system zvishoma. Pandinobatidza ovheni ndinogadzirira zvinhu zvakasiyana-siyana uye nokudaro, kunze kwokuchengeta simba, ndinoshandisa nguva yangu zviri nani. Zvadaro, nekeke richiri kupisa, ndinoiputira zvakanaka nepurasitiki ndokuiisa mufiriji! Pandinoida, ndinoiburitsa zuva rapfuura uye ndoirega ichinyungudika zvishoma nezvishoma… uye yagadzirira kushandisa.
Imwe hunyengeri yekugadzira iyi yekubheka: unogona kushandisa mazambiringa emakineni akatogadzirirwa Mugumo wegore, kunyanya kana iwe ukaona kuti nguva iri kumanikidza uye kuti kudzura mazambiringa kuri kukupa iwe basa rakawanda.
1 Mazambiringa uye chokoreti zvihwitsi
Vana vedu vachada kutibatsira kunze neiyi dhizeti.
Nguva yekugadzirira: 15M
Kubika nguva: 20M
Nguva yakazara: 35M
2 mazai akazara
50 g yeshuga yekeke
50 g yeupfu
10 g cocoa upfu
24 mazambiringa tsanga
1 girazi rewaini inotapira (Jerez, Pedro Ximénez, Mistela ...)
150 g yechokoreti yakavharwa
50 g yemvura
Tinochera mazambiringa uye tinoaisa mundiro newaini inotapira. Rega iite marinate kwemaminitsi makumi matatu.
Tinopisa ovheni kusvika 180º chete nekupisa kumusoro uye pasi. Hapana turbo uye hapana fan.
Isu tinoisa shavishavi pane blade, wedzera mazai neshuga. Isu tinoronga Maminitsi gumi pa4º uye kumhanya 37.
Mushure mekunge nguva yadarika takarova zvekare asi tisina tembiricha, hurongwa Maminitsi maviri, nekukurumidza 5.
Zvichakadaro, tinozora mold ine rectangular kuyera 38 cm x 25 cm nebepa risina mafuta rakavharwa nebhota.
Isu tinosanganisa hupfu necocoa uye tinoipepeta.
Kana nguva yapera, wedzera musanganiswa weupfu, urove Masekonzi mashanu pakumhanya 4.
Tinodurura musanganiswa muchigadzirwa chakagadzirwa. Isu tinofambisa tireyi zvinyoro kuitira kuti mukanyiwa ugoverwe zvakanaka, saka zviri nyore kuyera pamusoro.
Tinobika muhupamhi hwepakati hwevheni pakati 6 uye 8 maminetsi pa180º.
Kana keke raibva, ribvise kubva muchoto uye rega rigare muforoma kwemaminitsi mashanu.
Zvadaro tinosunungura uye torega kuti itonhorere zvachose pawaya rack.
Ne 5 cm diameter cookie cutter tinocheka 6 sponge cake discs.
Tinoisa chokoti mugirazi, tinoiisa panguva Masekondi gumi nemashanu pakufambira mberi 20-5.
Tinowedzera mvura uye purogiramu Maminitsi gumi pa4º uye kumhanya 37.
Mushure mekunge nguva yapera, tinowedzera bhotela uye re-program Maminetsi matanhatu, 4º, kumhanya 37.
Patinenge tichidhonza mazambiringa uye nejusi tinonyorovesa masponge discs.
Tinoisa zviyo 4 pane diski imwe neimwe uye tinozvishambidza zvachose nechokoti yakanyunguduka.
Tinoirega ichizorora mufiriji kusvikira nguva yekushandira.
Kuti uite dessert iyi yakakodzera vana, iwe unotofanira kuchinja waini inotapira yeapuro juice.
Kana iwe uchida kuzvipa iwe pachako uye mutambo wekubata, uzviise mutsime rakanaka rine zvimwe zveKisimusi kana kumwaya zvishoma zvinopenya zvinopenya pamusoro.
Mamwe mashoko - Cookies makuki / Hazelnut machokoreti
Tsvaga mamwe mabikirwo e: Nyore, Navidad, Keke, Tricks
Yakazara nzira kuchinyorwa: thermorecipes » Thermomix mapepa » Keke » Mazambiringa uye chokoreti zvihwitsi
Ndakafarira zano iri zvakanyanya. Iyo keke yakabuda yakandibata chaizvo. Pamwe yaive nekuti ndakaisa mweya mukati mayo. Zviri nani pasina iyo? Ndatenda nekapepeti uye nemazano. Kutsvoda
mweya uri muchoto unomhanyisa kubika. Iyo inondipa ini kunzwa kwekuti inoibika iyo nekukurumidza uye haina nguva yekutora chimiro, ndiko kuti, sekutaura kwako, zvakanyanya kuumbana.
Aya makeke ndiwo hasha dzese dziri mumba mangu!
Camembert casserole nematomatisi akaomeswa
Creamy cream uye dill sauce yehove